Yiba yingcali yokuHamba nokuKhuseleka koKhuseleko | Ukusuka kwiLinux
Yiba yingcali yokuKreqa nokuKhuseleka
Luigys toro | | GNU / Linux, Iyacetyiswa
Bonke abafundi beLinux kufuneka bacace malunga nokuba kuthetha ukuthini ukuba 'ngumgculeli', kuba ungumhlobo wethu IChrisADR Khange abachaze ngokweenkcukacha ezaneleyo kwinqaku Ithetha ukuthini 'inkohliso'Ingxubakaxaka ebangelwe leli nqaku, yongeze kwinani elikhulu labatyeleli abeza kuthi befuna ulwazi malunga ne Ukuqhekeza kunye nokukhuseleka, ngokudibeneyo namava ethu anzima ekukhuseleni iiseva zethu, ine "inyanzelekile" ukuzama ngazo zonke iindlela ukuba ubanga kwaye ufunde ngakumbi ngale ndawo inomdla.
Kufuneka siyicacise loo nto "Asizonjongo zethu ukuba ulwazi lokuqhekeza kunye nokuhluza lusetyenziswe nakubani na", ijonge emazantsi amantla angaphezulu, Sifuna ukuba abasebenzisi bethu kunye nehlabathi ngokubanzi bakwazi kancinci kancinci ukufunda iindlela kunye neengcinga ezibavumela ukuba bazikhusele kuhlaselo oluyingozi, okanye ukusilela ukuba banakho ukwenza yenza imigaqo-nkqubo yezokhuseleko ebanceda batshitshise amathuba okuhlaselwa.
Andililo ingcali kuloo ndawo, kodwa ukuba ndisebenze ixesha elide kwi iindawo apho ukhuseleko lwekhompyuter luthathwa ngokungathí sina, Kwafuneka nam lawula iinkqubo zokhuseleko kubaxumi bam, kodwa ngaphezulu kwako konke kwinqanaba lenkqubo endijolise kuyo yenza kwaye usebenzise iindlela zokwenza izicelo zam zikhuseleke ngakumbi. Ngayo yonke le nto ndifuna ukuthi ngokuchaseneyo noko abantu bakucingayo, ubuchule bokuqhekeza, nokuba kulula kangakanani okanye bunobunkunkqele kangakanani, bunokuba nefuthe elihle kubomi bethu bemihla ngemihla, busivumele ukuba sibe neekhompyuter ezikhuselekileyo kunye neenkqubo, ukuthintela amaxesha amaninzi ubumfihlo bethu bunyhashwa, kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kwedatha yethu.
Emva kwako konke oku kungasentla, akufuneki kube yimfihlo kuye nabani na kuthi ukuba kufanelekile funda ngokufanelekileyo malunga nokuHamba kunye nokukhuselekaNdiyayenza, yinto emnandi, engaqhelekanga, kodwa ngaphezulu kwayo yonke indlela ebonisa ubunzulu obuninzi kunye nesikhokelo esaneleyo ukuze ungagqibi ukusebenzisa iindlela ezingacetyiswanga kakhulu. Ndiqale ngofundo oluthe saa, kodwa ndikwazile ukuthatha ikhosi endibona ukuba ilungile nge Gqibezela ikhosi yokuKhangela ngokuSisiseko, le khosi indivumele ukuba ndibenolwazi oluqinisekileyo kwimiqondo, imigaqo kunye nemigangatho ephathwa imihla ngemihla kwezi ndawo, ukongeza kundikhokelela Yenza eyam ilebhu endijonge kuyo ukuba sesichengeni kunye nezisongelo endizama ukuzenza ngeendlela endizifundisiweyo kule khosi.
Ikhuphoni liza kusebenza ukusuka ngoJanuwari 6, 2018
Ikhuphoni litshintshile umda wesaphulelo ngokusekwe kwixabiso loqobo elonyuswe ngumenzi wezifundo. Nokuba liphi ixabiso, ikhosi ityetyisiwe ngohlaziyo olutsha
Njengakwizifundo zangaphambili, ndikwazile ukufumana isigqebhezana ukuze abasebenzisi beDesdeLinux bafumane ikhosi ngexabiso elikhethekileyo kwiintsuku ezisi-7 ezizayo, kulandela oku unxibelelwano uzokwazi unandipha ngokusisigxina ikhosi ngesaphulelo se- 90% 75% . Kwangokunjalo, ndithathe isigqibo sokwenza uphononongo oluneenkcukacha zekhosi ukuze sibe nombono wento esiza kuyiphumeza kunye nokuvela kwam malunga nomxholo, ulwakhiwo, indlela yokufunda, phakathi kwabanye.
1 Intshayelelo yokuBanga nokuKhuseleka.
1.1 Ulwazi loBugcisa bekhosi
1.2 Malunga nomhlohli kunye nendlela yokufunda
2 Izigqibo zakho
3 Ikhosi enxulumene nokuKhangela kunye nokukhuseleka
Intshayelelo yokuBanga nokuKhuseleka.
Ulwazi loBugcisa bekhosi
Le khosi yile yenziwe ziividiyo ezili-104, ezidibanisa ngaphezulu kweeyure ezili-16 zokudlala, enamaxwebhu abanzi, onke ngeSpanish kwaye ijolise kwi esidlangalaleni kuwo onke amanqanaba emfundo. enikezela isatifikethi sokugqitywa, ukufikelela kwikhosi kuvela kwi-Platform ye-Udemy onokufikelela kuyo nayiphi na isiphequluli kwaye unayo I-Android kunye nee-Ios.
Le khosi iyi-100% ithiyori-esebenzayo, kunye nezikhokelo ezininzi zesalathiso, ke kuyo yonke indawo uya kufunda ubuchule kodwa ubeke oko ukufundileyo, icandelo ngalinye linomboniso kunye nezinto ezizalisekisayo.
Malunga nomhlohli kunye nendlela yokufunda
UEduardo Arriols Nuñez isifundisa ngokucacileyo nangokuchanekileyo malunga nokugenca kunye nokukhuseleka kwikhosi kwikhosi yakhe Intshayelelo yokuBanga nokuKhuseleka, enemizekelo ebonisiweyo kunye nemiboniso yokwenyani kwiindawo ezilawulwayo nezingalawulekiyo, kuyo yonke ikhosi isinika iingcebiso eziluncedo, ukongeza ikhosi ngokubanzi inoluntu olusebenzayo olunokwabelana ngolwazi oluqinisekiswe ngutitshala.
Le khosi yahlulwe yangamacandelo amathandathu ajolise kule ndlela ilandelayo
Icandelo 1Le yunithi ejolise ngokucacileyo ekunikeni ikhosi, ukwazisa iikhonsepthi ezisisiseko kwaye ngaphezu kwako konke ukunika iingcebiso ezininzi kangangoko ezinokukuvumela ukuba ufumane okona kuninzi ekhosini.
Iyunithi ye2: Ngokusebenzisa iividiyo ezi-6 zemizuzu eli-10 kwi-avareji, intshayelelo enomdla kakhulu malunga nokuHamba ngokuziphatha kunye nokukhuseleka kunikwa, apho siya kufundiswa khona ngemibono esisiseko yokhuseleko kunye nophicotho-zincwadi, ukongeza ekusiboneleleni ngoqeqesho oluyimfuneko ukuze sikwazi ukuhlalutya iintlobo ezahlukeneyo kunye neevektri zokuhlaselwa, izixhobo ukhuseleko kunye neendlela zokhuseleko.
Icandelo 3: Icandelo lesithathu lisivumela ukuba sifunde ukwenza iilebhu zethu zovavanyo, apho ukubonwa koomatshini abahlaselayo nabasesichengeni kuya kuba sisiseko somdla wethu, ukongeza u-Eduardo usinika uhlalutyo olukhulu kulwabiwo oluphambili olujolise kwi-Ethical Hacking kwaye usilumkisa malunga nezo banoluhlobo oluthile lokuba sesichengeni (siyilelwe ukuba bafundise iinkqubo kunye neenkonzo).
Iyunithi ye4: Ungayilindela njani i-distro ecetyiswa ngu-Eduardo ukuba ifunde kwaye ifumane okuninzi kwi-Ethical Hacking yi-Kali Linux, ke kwiyunithi yesine sifundiswa ngokunzulu ukuphathwa kwenkqubo yokusebenza, izixhobo eziphambili ezikhoyo kule distro zichongiwe , Sinikwa uqeqesho olulungileyo ekusebenziseni ikhonsoli kwaye sifundiswa ukuphuhlisa izikripthi ze-bash ukwenza imisebenzi ngokuzenzekelayo.
Iyunithi ye5: Icandelo lesihlanu lijolise ekungachazekiyo kwi-intanethi, apho sinikwa ngokucacileyo nangokuchanekileyo intshayelelo kunye nothotho lweengcinga ezisisiseko ezinxulumene nokusetyenziswa kothungelwano lokungazichazi igama, ngendlela efanayo, sifundiswa ukufaka kunye nokusebenzisa izixhobo zokungazichazi ezifana I-TOR, i-FreeNet, i-l2P, i-proxies yokuhamba, iinkonzo ze-VPN kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho sifundiswa indlela yokwenza iqonga lethu lokungaziwa.
Icandelo 6Okokugqibela kweeyunithi kusilungiselela umhlaba onzima nolokwenyani, apho yonke imihla sijongana nokuba semngciphekweni kwaye ngaphandle kweendlela ezaneleyo zokuzikhusela esiya kuthi sichaphazeleke, siya kufunda amanyathelo okuchasene nobunjineli boLuntu kunye neeprotocol ezifanelekileyo zokwabelana ngolwazi, ngokulinganayo Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuchonga nokuxhaphaza inani elikhulu lezinto ezisengozini ngothotho lweendlela kunye nezixhobo uEduardo aya kuthi asifundise ukuzisebenzisa. Eli ziko lelona likhulu kuzo zonke kwaye lineeklasi ezingama-65, apho ngendlela eneenkcukacha ezininzi uya kufunda ezona ndawo zinzima kakhulu ezinxulumene nokuGwenxa kweMikhwa esesikweni.
Iiyunithi zibonisa iintlobo ngeentlobo zeevidiyo kunye namaxwebhu ahambelana nokufunda, kunye neemvavanyo ezibonisa ngokwenyani izakhono ozifumeneyo, ngaphandle kwamathandabuzo kuyindlela elungileyo ukuqala kweli lizwe likhulu lokuqhekeza kunye nokhuseleko lwe-cyber.
Ukuba uyingcali yokuqhekeza kunye nokukhuseleka kwe-cyber, kule khosi uza kufumana iziseko zobuchwephesha eziya kuthi zikwazi ukuphinda ziqinisekise ulwazi lwakho, uya kuba nakho nokuqinisekisa ubuchwephesha ongabaziyo kwaye uya kuba nethuba lokunxibelelana nabafundi abangaphezulu kwama-700 ababhalisele eli thuba lihle kangaka.
Ukuqaqambisa kukuba ikhosi 'iyaphila'. Oku kuthetha ukuba iividiyo ezintsha ziya kulayishwa rhoqo ngenyanga, kwaye ke, ixabiso lekhosi labafundi abatsha liya kunyuka. Kubo bonke abo bafundi sele befumene ikhosi ngaphambili, baya kuba nokufikelela okungenamda kuwo wonke umxholo omtsha owenziweyo.
Okokugqibela, intshayelelo yale khosi inokubonwa kwividiyo yokwazisa ekwi-Udemy, ndiyathemba ukuba iya kuba luncedo kuwe kwaye usebenzise ithuba cupón ukuze bonge imali xa benqwenela ukuyifumana, kuba ixabiso lekhosi liyi- $ 120 kwaye ngesaphulelo iya kuba 10,99 $ 29,99 $.
Ikhosi enxulumene nokuKhangela kunye nokukhuseleka
ngoku senza ikhosi enxulumene nayo ebizwa Intshayelelo yokuBanga nokuKhuseleka, yenziwe ngeevidiyo ezingama-56, zizonke ngaphezulu kweeyure eziyi-8 zokudlala, ezinamaphepha angaphezu kwama-250 olwazi oluneenkcukacha, zonke ngeSpanish kwaye zijolise kubaphulaphuli bawo onke amanqanaba emfundo. Ineemviwo ezisi-7 ezisasazwe ngokwamanqanaba kwaye zinika isatifikethi sokugqitywa ... Sifumene ikhuphoni kodwa sinethemba lokuphinda sabelane ngalo kwelinye inqaku, ngokungxamiseka nangokukunceda kuqeqesho lwakho, Apha ushiye ifayile ye- ikhonkco Ikhuphoni lale khosi lixabisa i $ 10,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Iyacetyiswa » Yiba yingcali yokuKreqa nokuKhuseleka
UJuan Martin sitsho
Ikhuphoni lesaphulelo alibonakali lisebenza. Isinika i-75% isaphulelo kwaye iya kuhlala kwi-29,99 euro ... njengabo bonke abantu abafikelele ngaphandle kwesigqebhezana.
Phendula kuJuan Martin
Molo, uxolo, ndithethile neqela le-Udemy kwaye isigqebhezana siza kusebenza ukusukela ngomso, ke ndiyaxolisa ukuba ibingafumaneki namhlanje ... Okwangoku ndizakushiya inqaku kwinqaku kunye nosuku ngomso ndiza kuhlaziya kwakhona xa isigqebhezana sisebenza ..
adrian abadin sitsho
Silivuselele inqaku lokuqala kunye nohlengahlengiso oluyimfuneko kunye neengcebiso, ngelishwa ngenxa yezizathu ezingaphaya kwamandla ethu, isigqebhezana sinokunikezela ngesaphulelo sama-25% ukuze ixabise i $ 29,90 ... Ngendlela efanayo, siye sacaca ngakumbi amagqabantshintshi kwaye ongeze ikhuphoni kwikhosi efanayo.
UFrank Davila sitsho
U-AMigo ndixolele, ndivela eVenezuela kwaye ndinomdla kule khosi kodwa akukho mfuneko yokuba ndihlawule eso sixa.
UHector Padró sitsho
Phendula Héctor Padró
anti ebomvu sitsho
Oko kushiyekileyo, abaceli behlabathi.
Phendula ngokuchasene nobomvu
Ndivela eVenezuela kodwa andiqondi ukuba zikhangelwa ntoni.
Molo ekuseni! Ndicofa kwikhonkco kunye nesabelo kwaye isaphulelo esikhankanyiweyo asiveli, ndifuna ukwenza le khosi
INGELOSI SATO Arevalo sitsho
Ndinekhadi elinesixa esiqikelelweyo, kodwa kubonakala ngathi isigqebhezana asisebenzi.
Phendula ANGEL SATO Arévalo
Molo, ngaba unalo uluvo xa ikhuphoni liza kusebenza? Ndiyabulela kakhulu.
Ikhuphoni lesaphulelo alibonisi okwangoku
Enkosi kakhulu ngenqaku !!!!! Nceda usazise xa isaphulelo siya kufumaneka? Masinwabe
Kwinqaku ithi isaphulelo singama-90% kodwa ngokwenyani singama-75% .. 🙁
Ndingumsebenzisi we-udemy iminyaka embalwa kwaye bahlala bebeka izaphulelo ezahlukileyo ezivela kwi-50% ukuya kwi-90%. Kungumcimbi wokulinda iipesenti ezingama-90 ukuba zibuyiselwe ngaphakathi ukuba awukwazi ukufikelela kwixabiso lokwenyani okanye isaphulelo sama-75%.
UAlberto C. sitsho
Ndisandula ukuthenga ikhosi ye-java kwi-Udemy kwaye ndicinga ngokuthenga ikhosi yokuziphatha okuhle, ngaba uyazi ukuba izibonelelo zithathwa rhoqo, okanye ukuba ziphela ngosuku iphepha elithetha ngalo okanye ukuba zongeza ezinye iintsuku ezimbalwa?
Ndilifumana phi ikhuphoni ukuze libe yi- $ 10.99?
Phendula u rarmando
molo, ikhona into entsha oyaziyo malunga nesigqebhezana?
gracias por iqabane
UJorge Perez sitsho
Ikhosi ijongeka inomdla, kodwa ikhowudi ayisebenzi okanye ayisiyokhosi.
Phendula kuJorge Perez
Mhlawumbi ukuba usinike ikhowudi yekhuphoni singayisebenzisa… 🙂
Ngaba uza kuyithumela ikhowudi yekhuphoni ukuze siyisebenzise?
Phendula u Pruden
Ngaba ikhona into oyaziyo malunga nesigqebhezana?
Abafana ndiqinisekisile ukuba isigqebhezana asisebenzi njengoko kufanelekile, ndibhale amatyeli ambalwa kumntu ophetheyo ukusinika inkuthazo e-Udemy, kodwa ngelishwa useholideyini eCuba enonxibelelwano oluncinci ... Ngokukhawuleza ukuba ikhuphoni lilungisiwe, ndiza kuthumela elitsha tyhala ukuze wonke umntu azi kwaye ndiza kuphendula kuye ngamnye wabo banomdla ukuze bafumane isaziso ...
Ndiyaxolisa ukuba isigqebhezana asisebenzi kakuhle, kwaye ndiyathemba ukuba ungazuza kungekudala kwaye ufikelele kwikhosi entle ngexabiso elifikelelekayo
Enkosi kakhulu ngolwazi lweLagarto. Sijonge phambili ekuthetheni isigqebhezana !!!!
Enkosi, ndiza kube ndibukele.
Kodwa isigqebhezana sisebenza kunye nomnikelo wangoku okanye ngaba sisigqebhezana esahlukileyo esikushiya ngesaphulelo sama-90% ???
Ngekhuphoni ixabiso lekhosi liya kuba yi-10.99 $
ok kunye nenani leentsuku eziqikelelweyo, liphuma nini eli phetshana ??? kunye noGrax
Mva kwemini, isaphulelo sama-90% asikabonakali. Ndinomdla wokuthatha le khosi. Ungandigcina unolwazi xa sinokuwonga? Ndiza kujonga, kodwa ukuba kunokwenzeka. Ikhosi ebonakala kwiphepha le-udemy ngesaphulelo se-90% kunye nexabiso le-10,99, yenye yeeyure ezingama-25, ngesiNgesi.
Ndifuna isigqebhezana ukuba ndinomdla kule khosi kodwa andinakukwazi ukufumana elona xabiso lale khosi 🙂
Ndilinde nekhuphoni (:
I-Hea ndifumana umgca wekhuphoni ukuba ikhosi ibonakala ilungile 😉
Enkosi kwaye ndithatha eli thuba lokukuhalalisela kwibhlog yakho, intle kakhulu, nangona ndinesidima kwaye ndingaze ndibhale gqabaza.
Imibuliso evela eBielefeld !!!
Bafundi ekugqibeleni siyifumene impendulo malunga nephetshana ebesilinikiwe ukuze bonke abasebenzisi be-desdelinux bakwazi ukufikelela kwezi zifundo ngentlawulo eyi- $ 10,99, ngelishwa eli coupon alinakusetyenziswa ngaphandle kwe-30 yeedola kwikhosi nganye Ngamanye amagama, isaphulelo sama-75%, kuba umsebenzisi owenze le khosi uyonyusile umrhumo kwaye iqonga livumela kuphela eli xabiso njengobuncinci (ndiyazisola ngale nto yenzekileyo). Udemy abasebenzi bazamile ukufikelela kumsebenzisi ukufikelela kwisivumelwano, kodwa kubonakala ukuba abaphendulanga ngenxa yokuba useholideyini.
Ngendlela efanayo, le khosi yeyokunethezeka, kuba Paco sepulveda isifundisa ngokucacileyo nangokuchanekileyo malunga nokugenca kunye nokukhuseleka kwe-cyber, ngemizekelo ebonisiweyo kunye nemiboniso yokwenyani kwiindawo ezilawulwayo nezingalawuleki
Enkosi kakhulu ngolwazi!
zaf umlambo sitsho
Ngaba uyazi ukuba isigqebhezana sesaphulelo sisasebenza? '
Phendula umfula we-zaf
Ukukhetha ulwimi lwakho lokuqala lwenkqubo
Ubuhlobo: Ipakethi ebalaseleyo yezixhobo zokukreqa